Mahad Faarax Oo Lagu Dilay Degmada Xamarweyne. – Calamada.com
Mahad Faarax Oo Lagu Dilay Degmada Xamarweyne.
Rag hubeysan waxey saacadihii lasoo dhaafay gudaha degmada Xamarweyne ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaay nabadsugida dowlada Ridada federaalka’iyadoona faahfaahino dheeraad ah ay kasoo baxayaan dilka sarkaalka.
Mahad Faarax ayaa lagu magacaabaa sarkaalka maanta lagu dilay Ceel-gaabta degmada Xamarweyne’waxaana sarkaalkan uu ka tirsanaay saraakiisha qeybta Gaashaan ee nabadsugida dowlada Ridada federaalka.
Raga hubeysan ee sarkaalka dilay ayaa la xaqiijiyay iney si nabad ah goobta kaga baxsadeen’waxaana meydka sarkaalka markii dambe goobta ka qaaday maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka dowlada federaalka.
Waa sarkaalkii shanaad oo wax ka yar 24 saac gudahood ah lagu dila magaalada Muqdisho’iyadoona maalintii shalay afar sarkaal oo ka tirsanaay nabadsugida lagu kala dilay degmooyinka Wadajir iyo Boondheera ee magaalada Muqdisho.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 25-06-1437 Hijri.
Next: Madaafiic Lagu Garaacay Xarunta Madaxtooyada Villa Somali.
2 thoughts on “Mahad Faarax Oo Lagu Dilay Degmada Xamarweyne.”
murtadkaan ninkii umadda ka hor wareejiyey, ilaahay janno ha ugu abaalgudo,
murtadkaan wuxuu dhankasta uga ekaa GABRE. xagga baxaaliga, dherarka, wajiga, dhaqanka, akhlaaqda iyo diintaba.
Ninkii dadka muslimiintaa dhibo masiirkiisa saasuu ku danbeenaa,
Hada murtadkaan gaalnimo ku baqtiyey